Okokuqala, qiniseka ukuthi unako kokubili lokhu: i-Ikhlaas kanye ne-i'tibaa – okungubumsulwa benhloso kanye nobulungiswa bokwenza. Kungabe inhloso yakho ngempela wukusondeza lomuntu eduzane neqiniso na? Noma wukuqiniseka ukuthi yena ulahlekile? Noma wukuveza isiphiwo sakho sokuba yigagu lokukhuluma na? Qiniseka ukuth inhloso yakho kuphela wukuthokozisa u-Allah. Wukulethela lomuntu eduzane neqiniso kanye nokumholela kwi-Deen ya Allah, i-Islam. Uphinde futhi aqiniseke ukuthi le-Da'wah uyenza indlela eyiyo, endaweni nangesikhathi ezifanelekile.
Yazi ukuthi ukhuluma ngani. Qiniseka ukuthi unalo ulwazi olunzulu ngalokho okushoyo. Ambulate ukuthi u-Mohammad (ukuthula makube kuye) wathembisa isihlalo esihogweni kulowo oqamba amanga ngaye. Qiniseka ukuthi okushoyo kuyikho ngempela. Thembeka uma ungazi. Uma ungenalo ulwazi oluqinileyo ngalokho okushoyo, ukuzikhandla kwakho kungaba nomthelela omubi esikhundleni somuhle.
Yiba nenkolelo ephelele engenalo ungabazane, kulokho okushoyo. Kuthiwa okuphuma emlonyeni kungena endlebeni, kodwa okusuka enhliziyweni kuya enhliziyweni. Isisho sesi-Arabhu siphinde sisho sithi awusoze wakwazi ukunikezelangalokho ongenakho. Uma kunento ongakholelwa kuyo, akekho ongamenza akholelwe kuyo. Ubumsulwa bakho nokungangathekisi kwakho okholweni kudlala indima enkulu empumelelweni yakho kwi-Da'wah.
Yenza lokho okushumayezayo. Indlela ye-Da'wah ezishaya zonke yileyo yesibonelo.
Ungalinge uxoxe ngokubaluleka kweqiniso nokwethembeka kwi-Islam uma wena ungumqambi wamanga nomphingi wansukuzonke. Qiniseka ukuthi izenzo zakho zichaza ubuhle bezinkolelo neziyalo ze-Islam. Ubumbulu buxosha abantu.
Amadoda angaba nabafazi abane? Kungani singakwazi ukujola? Kungani singabamukeli ongqingili? Ungalinge uvume ukushwelezela ubunjalo be-Islam. Kuhlaziye ngendlela abantu abazokwazi ukuyiqonda, kodwa ungalokothi ukuphendulelee noma wenze sengathi akulungile noma kungikwesikhathi sasemandulo.
Ungabi nolaka. Ungavumeli abantu bakuphazamise noma bakwenze ushintshe ukuiphathakwakho. Yiba ne-Adaab (ukuziphatha) ngasosonke isikhathi. Uma kukhona onqabayo ukukulalela, mshiye ngokuthula. Ungehleli ezingeni labo. U-Allah sub'haanahu wa ta'ala usho kwi-Qur'aan eNgcwele okuchazeka kanje, “Bambelela oxolweni; khuthaza lokho okuhle ; kepha qhelela kude kwabangenalwazi.” Uphinde futhi asho okuchazeka kanje; “Uma bezwa inkulumo eyize, bayaphenduka basuke ngakuyo bathi, Izenzo zethu kithina, nezakho kuwena; ukuthula makube kuwe: asidingi abangazi lutho”. Ungalinge uchithe isikhathi sakho noma amandla akho ngalabo abangazimisele ukulalela.
Sebenzisa imicimbi emihle. Hambela izinhlelo zamabandla ehlukene nezingxoxo ezivulekile.
Ziqhelelisane nabezimishani. Akwazeki ukuthi lokhu kungagcizelelwa kanjani. Umgomo wabo wukukhiphela ngaphandle kokholo lwakho. Bashiyele kulabo abalolongelwe ukubhekana nabo. Abezimishani balolongelwe ukuba babonakale ngaphandle benobungane futhi bezimisele ngokufunda, ekubeni umgomo wabo nenjongo yabo kuwukwenza wena ushiye phansi i-Islam. Ungakhulumi nabo Ungalinge uqalise ingxoxo nge-Islam nabo. Ungahambeli izindawo zabo ezingcwele. Ungamoshi isikhathi sakho nabo. Isikhathi sakho singasetshenziswa ngendlela enembuyiselo ethe xaxa kunokuzama ukuphikisana nalowo ololongelwe ukufaka ukungabaza.
Ungalokothi weye inkonzo yomunye umuntu. Ngisho noma ngabe kuhalisa kangakanani ukukhuluma ngamaphutha nokuyishaya emuva naphambili okutholakala ezinkonzweni zabanye, ungakwenzi. Kuyabanenga abantu lokho, kanti futhi kungenzeka kubenze bayibuke ngeso elimbi i-Islam. Khuluma ngokuhluka kwe-Islam, kulapho-ke usungathi ukuthinta amaphutha ezinye izinkonzo, kodwa lokho akusho ukuthi khwela udilike okholweni lwalomuntu osuke ukhuluma naye. Yiba nenhlonipho. Nanku umzekelo we-Da'wah esabekayo: I-Muslim lalikhuluma esikoleni samabanga aphakeme endaweni, laqala inkulumo yalo ngokuthi: “Nonke niya esihogweni.” Ngaleyondlela labe selilahlekelwa ngabalaleli bonke ngaphambi kokuba liqale ngenkulumo yalo.
Phawula ngolokho okwenza i-Islam ibe yinhle kuwe. I-Da'wah ukuphindaphinda izinsika ezinhlanu. Ngesinye isikhathi siyathatheka sichaza izinsika ze-Islam, size sikhohlwe yisakhiwo uqobo lwaso. I-Islam inendima eyidlalayo kuyo yonke impilo yethu. Khuluma ngendima eyidlalayo ngokuthi ulala kanjani, uziphatha kanjani izilwane, abazali, izaguga, omuntuza, obunye ubulili. Khuluma ngokuhlonishwa kwabesimame kwi-Islam, imiqondo yokuhlanzeka noma ukuzithoba, ukukhuthaza kwayo ukuba sizindle sicabange ngomhlaba osizungezile. Kukhona umfowethu owamukela i-Islam ngenxa yokuhlonipha kwe-Islam indalo. I-Islam iyi Deen, indlela ephelele yempilo. Jula ungene emniningwaneni ukudlula incwadi ye-Social Studies yakwa-Grade 9.
Ukuphetha, yiba ne-Sabr. Akusiwona umsebenzi wakho ukuphendula abantu-asikho isibopho kwi-Islam esikubophezelayo ukuba uphendule isibalo esithile sabantu babe ngamaMuslim. Isibopho sakho yikho ukuba ubizele abantu kwi-Islam, nokuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Ukuthi wubani oyamukelile nongayamukelanga, lokho kusemseni ka-Allah Sub'hanahu wa ta'ala.
Kanti-ke u-Allah, uMholi, wuYe Owazi kangcono.